PSJTV | पार्टी एक, कोष दुई, सांसदको लेबी दर पनि बेग्लै
पार्टी एक, कोष दुई, सांसदको लेबी दर पनि बेग्लै
सत्तारुढ नेकपा बनेको १३ महिना भयो । तर, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको कोष भने अहिले पनि वेग्लावेग्लै खाताबाट चल्छ । पूर्वएमालेका सांसदहरूले पार्टीलाई मासिक १३ हजार बुझाउँछन् । पूर्वमाओवादी सांसदले भने १२ हजार बुझाउँछन् । तर, यो लेबी भिन्दाभिन्दै कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । संघीय संसद्मा नेकपाका पदाधिकारीको समायोजन भइसक्यो । तर, कोष मात्रै होइन, संसदीय दलको कार्यालय पनि अहिलेसम्म वेग्लावेग्लै चलिरहेको छ ।
पार्टीको एकता पूर्ण रूपमा टुंगिन बाँकी रहेकाले कोष एक हुन नसकेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । ‘दलको नेता, प्रमुख सचेतकलगायत राष्ट्रिय सभामा पनि पदाधिकारी एकता टुंगिइसकेको छ । कोष पनि मिलाउने भन्ने सिद्धान्त हो । पार्टीको एकीकरण पूर्ण रूपमा टुंगिइनसकेकाले दुई छुट्टाछुट्टै खातामा रकम जम्मा भएको हो,’ उपनेता नेम्वाङले भने ।
लेबी दर फरक दलको कार्यालय फरक
पूर्वएमालेका प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ र राष्ट्रिय सभामा २७ गरी १४८ सांसद संघीय संसद्मा छन् । त्यस्तै, पूर्वमाओवादीका प्रतिनिधिसभामा ५३ र राष्ट्रिय सभामा १२ सहित ६५ सांसद छन् । दुवै पार्टी एकीकरण भइसकेपछि २ सय १३ सदस्य संख्याको नेकपाको संसदीय दल बन्यो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा रहेको पूर्वएमालेको दलको कार्यालयमा मात्र तथा पूर्वमाओवादीको दलको कार्यालयमा मात्र सबै अट्न नसक्ने भएकाले हाल नेकपाको संसदीय दल बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा बस्छ ।
संसद् सचिवालयले नेकपाको दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग नयाँ भवन मागे पनि सरकारबाट प्राप्त नभएकाले ठाउँ अभाव रहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । पाण्डेले भने, ‘अहिले एडजस्टमेन्ट मात्रै भएको छ । कोठा पुगिरहेका छैनन् । सरकारले संसद्को नयाँ भवन ३ वर्षभित्र बनाउने घोषणा गरेको छ । अब नयाँ भवनको आशा गर्नुबाहेक विकल्प देखिएन । नयाँ भवनको माग गर्दा सरकारले उपलब्ध नगराएकाले नेकपाको दलको कार्यालय एकै ठाउँ बनाउन कठिन भएको हो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रेमिकाले तिला नदीमा फाल हानेपछि प्रेमीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा !
नेकपामा यसरी मिल्यो भागबन्डा
मौसमको पूर्वसूचना चाहिएको छ ? फोन गर्नुस् टोल फ्री नम्बरमा
असारदेखि नेपालमा पनि ई-पासपोर्ट
9th Jun 2019 पिएसजे न्युज
नेपालगञ्ज : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ...
29th Jun 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडाैं: वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको कोरिया शाखाले जेठ २६ र २७ गते लिएको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा शुक्रबार प्रकाशित गरेको छ। परीक्षामा १२ हजार नौ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । यो वर्षदेखि ...
सातै प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुखबीच शीतयुद्ध चर्किएको छ। केहीको बोलचाल बन्द छ। केही जनप्रतिनिधि अधिकार खोसिएको भन्दै अदालत पुगेका खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ। बजेट बाँडफाँट, योजना तर्जुमा, निजी ...